Casa Campesina Guadalupe Chivata Teleworking
Ikhabhinethi yaseGuadalupe yindawo encinci yeefama ezisezindulini zaseBoyacense imizuzu eyi-15 ukusuka eTunja kunye neeyure ezimbini ukusuka eBogotá ngemoto. Ifumaneka kwiVereda Ricaya Sur, eChivatá enobude obumalunga neemitha ezingama-2,900, iinduli neentlambo zayo zinika umbono oncomekayo, abathandi bokucamngca imigama baneparadesi eGuadalupe. Kukho iindlela zokuhamba ezinobunzima obuphantsi.
I-cabin enhle iquka igumbi elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye neholo elinombono we-landscape, i-wifi.
ICasa Guadalupe yenza iphupha lokwenza indawo yokuhlala yasemaphandleni ikhululeke kangangoko kunokwenzeka. Le loji, ekumbindi wamabala aseBoyacá, iyinxalenye yamagumbi athile, ekwayilwe yiGalpón Guadalupe, indawo yokulala yabatyeleli ekumgangatho ophantsi, kunye neCasa Origen, apho ndihlala khona.
Kule ndawo ndamkele izinja ezi-5 ezihlangulweyo, ezizisa idosi eyongezelelweyo yothando kwezazo kunye neendwendwe. Ngala: Indoda etyebileyo, kunye “namantombazana”: uAsami, uVioleta, uTomasa noPepita. Kakade ke, baneenneli ezinkulu yaye baphuma izihlandlo eziliqela ngemini xa besiya kuhambo lwabo, kuxhomekeka kwiimeko zemozulu!
Ngokufanayo, bahlala kule ndawo, kunye nesitali sabo, iigusha ezi-4: uChavela, uNatasha kunye neemvana zabo: u-Ivanka noVladimir, abadla kwaye badle imini yonke.
Bakwaxhasa iqela labamelwane ukusuka ecaleni kwendlela kwimisebenzi yemihla ngemihla, kwaye ukuba unobuganga, unokufunda malunga namava obomi babalimi!
ECasa Guadalupe ungumnini wamaxesha akho, kwaye kuqinisekile ukuba uya kuba nakho ukunxibelelana nokucamngca kwendalo, ukuphefumla okungangxamanga kunye namandla okuthi cwaka.
Kumazwe akufuphi neGuadalupe kukho izindlu zabalimi bomthonyama baloo mmandla abaziphilisa ngokuyintloko ngezityalo zesonka, imihlambi emincinane yeenkomo, iigusha zoboya nenyama, neenkuku, onokuphila nazo emaphandleni, ngaphambilana. isaziso kunye nentlawulo ezimeleyo
Undwendwe lunokuthembela kuthi ukusombulula iingxaki zabo